Apple chọrọ okpukpu abụọ izo ya ezo nke iCloud | Esi m mac
Jesus Arjona Montalvo | | Noticias, Asịrị, ọtụtụ
Apple na-arụ ọrụ obi tara mmiri iCloud izo ya ezo n’etiti agha ya na ya nọ FBI. Dị ka ọ dị, ụlọ ọrụ Cupertino nwere ohere ịnweta data sitere na nkwado ndabere na iCloud, ma nwee ike ịnapụta ya n'okwu ndị dị ka iPhone 5C nke ndị San Bernardino eyi ọha egwu, ma ugbu a ị chọrọ ịgbanwe nke ahụ.
Dị ka otu akụkọ si 'Akwụkwọ akụkọ Wall Street Journal', Apple chọrọ ime ka iCloud izo ya ezo siri ike na ọbụnadị na ha enweghị ike itapia, dị ka izo ya ezo ejiri chebe data echekwara na mpaghara na ngwaọrụ iOS.
Agbanyeghị, na Ndị isi Apple na-adọga na-esi obi ike iCloud izo ya ezo na n’enweghị ndị ọrụ nsogbuna-agbakwụnye akụkọ ahụ. Apple na-anya isi na ya na-eke kensinammuo na mfe na-eji software, na ụfọdụ na Apple na-eche banyere agbakwunye mgbagwoju anya.
Ihe ọghọm nke izo ya ezo dị nchebe karịa bụ na ọ bụrụ na onye ọrụ echezọ paswọọdụ ha ha nwere ike ida niile data na ha akwadoro iCloud, Apple agaghị enwe ike ịgbapụta ha maka ha. Nke a bụ ihe kpatara Apple enweghị ike ịnweta data iPhone nke Syed Farook jiri na-enweghị passcode.
Ya na izo ya ezo ana achi achi na naanị onye ọrụ iPhone nwere ike ịnweta ya. Ọ bụrụ na abanyela akara passcode ọtụtụ oge, mgbe ahụ ngwaọrụ ahụ nwere ike ịkwụsị ma kpọchie, na-ahapụ FBI na enweghị ihe ọ bụla. Nanị ụzọ ịbanye bụ site n'ọnụ ụzọ azụ nke gafere ụzọ nchekwa ndị a. Ma dị ka anyị niile mara Apple achọghị ịmepụta ụzọ azụ a maka ebumnuche doro anya.
N'ihi nchegbu ndị a, ịkwagide ụdị mmebe iwu a edoghị anya, na-agbakwunye 'Akwụkwọ akụkọ Wall Street Journal'. Ihe obula Apple gha eme iji mee ka izo ya ezo sie ike "Antagonize ọbụna karị" ndị mmanye iwu, ndị na-emegide ọnọdụ Apple.
Ndabere nke iCloud agbasaghị ịgụnye otu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọ bụla data dị mkpa na ị debere na ngwaọrụ iOS gị, gụnyere ntọala na mmasị, okwuntughe dịka netwọk Wi-Fi, foto gị na vidiyo gị, listi ịkpọtụrụ, iMessages, na data ahụike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple chọrọ okpukpu abụọ izo ya ezo nke iCloud
Zaghachi Tony Torres
Mana ọ bụrụ na iji nchekwa dị ugbu a, mmadụ enweghị ike ịnweta,